ढोरपाटन भलिबलको १५ वर्ष : कुन कुन टिम च्याम्पियन ? - Khelpati
ढोरपाटन भलिबलको १५ वर्ष : कुन कुन टिम च्याम्पियन ?
बिहिवार, फाल्गुन १, २०७६ गिता राई
काठमाडौं । नेपालमा महिला भलिबल प्रतियोगिता भन्ने बित्तिकै ढोरपाटन महिला डबल लिग भलिबल प्रतियोगिताको नाम अगाडी आउने गर्दछ ।
ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबको आयोजनामा हरेक वर्ष सञ्चालन हुँदै आएको प्रतियोगिताले नेपाली महिला भलिबललाई एक उचाईमा समेत पुर्राएको छ ।
नेपाली महिला भलिबलको उडानमा ढोरपाटन महिला भलिबल लिग संधै एक सहयात्रीको रुपमा रह्यो ।
नेपाली महिला भलिबल टिमले गत मंसिरमा बंगलादेशमा भएको एभिसी सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि जित्दै ऐतिहासिक सफलता पाएको थियो ।
घरेलु भूमिमा सम्पन्न १३ औं सागमा महिला टिमले ऐतिहासिक रजत पदक जितेको थियो । महिला टोलीले पाएको यो सफलताको केहि श्रेय ढोरपाटन महिला लिगलाई समेत जान्छ ।
ढोरपाटन महिला लिग सुरु भएको एक दशक बितिसकेको छ । बुधबार मात्र प्रतियोगिताको १५ औं संस्करण सकिएको थियो ।
प्रतियोगिता जति पुरानो हुँदै गईरहेको छ यसको लोकप्रियता समेत बढ्दै गएको छ ।
प्रतियोगिताको १५ औं संस्करणसम्म एपीएफ क्लबले सर्वाधिक ७ पटक उपाधि जितेको छ । यस्तै पोखराको ज्ञानुबाबा स्कुलले पाँच पटक उपाधि जितेको छ । यस्तै रिड मोडल स्कुल र नेपाल पुलिस क्लबले एक एक पटक उपाधि जितेको छ ।
ढोरपाटन क्लबले १५ औं संस्करणसम्म आईपुग्दा पुरस्कारलाई पनि वृद्धि गर्दै गईरहेको छ । हालसम्म क्लबले खेलाडीको व्यक्तिगत विधातर्फ ३६ वटा स्कुटर र ३ तोला सुन खेलाडीलाई बाडिसकेको छ । यस्तै दर्शकहरुलाई भलिबलमा आकर्षण गर्ने हेतुले लक्की ड्रबाट २ थान बाईक र २ वटा स्कुटर बाडेको छ ।
ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबले वि.सं २०६२ सालबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको थियो । तर, पहिलो पटक पुरुषको प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो ।
टुँडिखेलमा सञ्चालन प्रतियोगिताको विजेता त्रिभुवन आर्मी भएको थियो र टिमले ४० हजार पाएको थियो । उक्त प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडी कृष्ण शेरचन भएका थिए र उनले पल्सर बाईक पाएका थिए ।
तर, पहिलो संस्करणमा विभिन्न कठिनाई भोगेको ढोरपाटनले दोस्रो संस्करण भने महिलाको गर्ने निधो गर्यो र सफल पनि भयो ।
वि.सं २०६३ सालमा पहिलो पटक महिला भलिबल प्रतियोगिता भयो । त्यस संस्करणमा ज्ञानुबाबा च्याम्पियन बन्दै नगद ५० हजार पाएको थियो । यस्तै उत्कृष्ट खेलाडी सिपोरा गुरुङ घोषित भएकी थिईन् र उनले नगद ८ हजार पाएकी थिइन् ।
२०६४ सालमा ज्ञानुबाबा नै च्याम्पियन बनेको थियो र ६० हजार पाएको थियो । प्रतियोगितामा मञ्जु गुरुङ उत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुँदै एक तोला सुन पाएकी थिईन् ।
यस्तै २०६५ को संकरणमा पनि ज्ञानुबाबाले उपाधि जित्दै ह्याट्रिक गरेको थियो । त्यस संकरणमा ज्ञानुबाबाले १ लाख ३० हजार हात पारेको थियो । उत्कृष्ट खेलाडी हुँदै सिपोरा गुरुङले एक तोला सुन पाएकी थिईन् ।
वि.सं २०६६ सालमा ज्ञानुबाबाले नै उपाधि जितेर २ लाख २ हजार पाएको थियो । प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीमा परीक्षा गुरुङ घोषित भईन् र उनले एक तोला सुन हात पारिन् ।
त्यसपछि २०६७ सालमा ज्ञानुबाबाले अन्तिम पटक उपाधि जित्दै २ लाख १५ हजार पाएको थियो । त्यस संकरणमा उत्कृष्ट खेलाडी रमिला तण्डुकार भएकी थिइन् र अन्ना लिफान स्कुटर पाएकी थिइन् । यस्तै वर्ष खेलाडीमा परीक्षा गुरुङ घोषित भईन् र उनले एटीभीएस स्कुटर पाएकी थिईन् ।
वि.सं २०६८ सालमा भने ढोरपाटनले नयाँ च्याम्पियन पाएको थियो । उपाधिमा नेपाल पुलिस क्लबले बाजी मारेको थियो । उपाधिसँगै पुलिसले २ लाख २० हजार पाएको थियो । यस्तै प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीमा रमिला तण्डुकार, सर्वाेत्कृष्ट खेलाडीमा मञ्जु गुरुङ र वर्ष खेलाडीमा चुडा खड्का घोषित भएकी थिइन् । उनीहरुले टीभीएस स्कुटर पाएका थिए ।
यस्तै, वि.सं २०६९ सालमा एपीएफ ढोरपाटन महिला भलिबलको नयाँ च्याम्पियन बन्यो र नगद २ लाख २५ हजार हात पारेको थियो । यस संस्करणमा उत्कृष्ट खेलाडीमा सरस्वती चौधरी, उदयमान खेलाडीमा कमला पुन र वर्ष खेलाडीमा निता शाह चुनिए । उनीहरुले टीभीएस स्कुटर पाएका थिए ।
वि.सं २०७० सालमा एपीएफ च्याम्पियन हुँदै २ लाख ५१ हजार हात पारेको थियो । प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीमा अरुणा शाही, उदयमान खेलाडीमा प्रतिभा माली र वर्ष खेलाडीमा बिनिता बुढाथोकी चुनिएका थिए । उनीहरुले टीभीएस स्कुटर पाएका थिए ।
यसैगरी २०७१ मा पनि च्याम्पियन बनेको एपीएफले नगद २ लाख ५५ हजार हात पार्यो । प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीमा प्रतिभा माली, उदयमान खेलाडीमा मनिषा चौधरी, वर्ष खेलाडीमा कोपिला उप्रेती र सर्वाेत्कृष्ट खेलाडीमा रेश्मा भण्डारी चुनिदै टीभीएस स्कुटर हात पारेका थिए ।
वि.सं २०७२ मा पनि एपीएफले च्याम्पियन बन्दै २ लाख ६० हजार पायो । उत्कृष्ट खेलाडीमा कमला पुन, उदयमान खेलाडीमा ललिता नाथ, वर्ष खेलाडीमा नेबिका चौधरी र सर्वाेत्कृष्ट खेलाडीमा मञ्जु गुरुङ घोषित भएका थिए । उनीहरु सबैले टीभीएस स्कुटर पाए ।
वि.सं २०७३ सालमा भने भारतीय खेलाडीले भरीभराउ रिड मोडल कलेज च्याम्पियन बन्यो । रिडले ३ लाख २० हजार हात पारेको थियो । उक्त संस्करणमा उत्कृष्ट खेलाडीमा हाल भारतीय राष्ट्रिय टिमकी कप्तान मिनिमोल, उदयमान खेलाडीमा तारा भण्डारी, वर्ष खेलाडीमा सरस्वती चौधरी, सर्वाेत्कृष्ट खेलाडीमा कामना विष्ट र ग्रेट एचिभमेन्ट अर्वाड प्रतिभा मालीले जितेका थिए । उनीहरु सबैले टीभीएस स्कुटर पाएका थिए ।
वि.सं २०७३ सालपछि भने एपीएफले लगातार उपाधि जित्दै आएको छ । वि.सं २०७४ मा च्याम्पियन बनेको एपीएफले ३ लाख २५ हजार पायो । यस्तै उत्कृष्ट खेलाडी सरस्वती चौधरी, उदयमान खेलाडी सर्मिला नेपाली, सर्वाेत्कृष्ट खेलाडी निरुता ठगुन्ना, वर्ष खेलाडी प्रतिभा माली घोषित भए । त्यहि वर्षबाट सुरु गरिएको भाग्यमानी दर्शकमा राजु घोटानी भएका थिए । उनीहरुले युएम स्कुटर पाएका थिए ।
वि.सं २०७५ को उपाधि पनि एपीएफले नै जित्यो । त्यस संस्करणमा एपीएफले ३ लाख ५० हजार पाएको थियो । प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडी सरस्वती चौधरी, उदयमान खेलाडी शान्ती थारु, वर्ष खेलाडी अरुणा शाही, सर्वाेत्कृष्ट खेलाडी कोपिला राना र भाग्यमानी दर्शकमा भिम देवकोटा घोषित भए र सबैले सुजुकी स्कुटर पाएका थिए ।
बुधबार सकिएको १५ औं संस्करणको ढोरपाटन भलिबल डबल लिग भलिबल प्रतियोगितामा फेरी पनि एपीएफ च्याम्पियन बन्यो । सातौं पटक च्याम्पियन बनेको एपीएफले नगद ४ लाख ५ हजार पाएको छ ।
यस संस्करणमा सर्वाेत्कृष्ट खेलाडी आर्मीकी सोफिया पुन, वर्ष खेलाडीमा होङग्वान्जी न्यु डाईमण्डकी लिब्रो सलिना श्रेष्ठ, उदयमान खेलाडीमा पुलिसकी उषा भण्डारी र ग्रेट एचिभमेन्ट अर्वाड एपीएफकी बिनिता बुढाथोकी भए । उनीहरुले युएम स्कुटर पाए । यस्तै भाग्यशाली दर्शक बनेका अनिल बुढाथोकीले एक थान बाईक पाए ।